Barnaamijka caanka ah – Bogga 30 – Windows – Vessoft
WindowsBarnaamijka caanka ah – Bogga 30
Faylka loo yaqaan ’Folder Lock’ – waa aalad lagu ilaaliyo macluumaadka ka soo horjeedka dadka dibada jooga. Softiweerku wuxuu xaqiijinayaa ilaalin macluumaad oo la isku halleyn karo iyadoo la adeegsanayo algorithms encryption xoog leh.
Caliber – softiweer si loo akhriyo buugaagta elektaroonigga ah. Softiweerku wuxuu leeyahay dhowr qalab oo loogu talagalay xakameynta horumarsan ee ururinta buuggaaga.
software The inuu ka soo kabsado lunsan passwords Wi-Fi. software The kabanayso furayaasha oo dhan ammaanka WAP ama WPA in ay ku kaydsan yihiin in hawshii nidaamka qalliinka.
Tool u xiritaanka automatic. Software ayaa awood u siineysaa inay beddelaan computer soo galay qaabab kala duwan oo la xidhi on jadwal.
Tool in ay tayadoodii iyo in la kordhiyo waxqabadka nidaamka. Software ayaa si toos ah baadhaa dhibaatooyinka nidaamka iyo ogolaanaya in la saxo qaladaad.
Tool in la kordhiyo xasiloonida iyo xawaaraha nidaamka. Barnaamijka qabata beddelka iyo ka saaraysaa khaladaad, entries madhan ama aan waxtar lahayn in diiwaanka.
fudud An in la isticmaalo ciyaaryahan audio oo ay taageertaa qaabab loo jecel yahay. software The kuu ogolaanayaa inaad dhegayso raadiyaha online iyo si ay u disc a gubi music.